လေးလေးကျော်ရဲ့ အမျှဝေသံကိုကြားလိုက်ရတဲ့ကျွန်မ၊ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ သာဓုခေါ်ဆိုလိုက်ရင်းအ်ိပ်ယာကနေထလိုက်ရပါတယ်။ နံနက် ၅နာရီခွဲကျော်ကျော်လောက်ဆို လေးလးကျော်ရဲ့ အမျှဝေသံက ပုံမှန်ကြားနေကျ။
တစ်ဖက်ခန်းမှာအိပ်နေတဲ့ အေးတို့ညီမကိုလှမ်းနိုးလိုက်ရင်းတစ်နေ့တာအတွက် အားအင်အပြည့်နဲ့လည်ပတ်ရဦးမှာပါလားလို့တွေးမိလိုက်ရင်းကပဲလုပ်စရာအလုပ်တွေကိုခပ်သွက်သွက်လေးလုပ်လိုက်ရပါတယ်။
ကျွန်မတို့သုံးယောက်ကမနက် ၈နာရီခွဲကနေညနေ ၆ နာရီထိဈေးရောင်းရတဲ့ လက်ကီလက်ကားဆိုင်တစ်ခုရဲ့ အလုပ်သမားတွေပါ။ အလုပ်သမားတွေဆိုပေမယ့် ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ယာလိုနေရယုံမကကိုယ့်လက်ကိုယ့်ခြေနဲ့လုပ်ကိုင်ရတဲ့တာဝန်တွေကလည်း တစ်ပုံတစ်ပင်။ စိတ်ချယုံကြည်မှုနဲ့အတူနယ်ဘက်တွေကိုဆိုင်ခွဲတွေဖြန့်ထားတဲ့ အလုပ်ပိုင်ရှင်ကတော့ သဘောဖြူ၊ မနောဖြူ။ နေ့စဉ်ရောင်းရငွေသိန်းကျော်တွေနဲ့ များပြားလှတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို တစ်လလုံးတာဝန်ယူထားရပြီး အကိုလေးစာရင်းလာစစ်ချိန်မှ ပစ္စည်းနဲ့ငွေနဲ့ ပြန်အပ်ရတာမျိုးဆိုတော့ အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သများကြားမှာသစ္စာရှိမှု၊ ယုံကြည်မှုနဲ့ အလုပ်လုပ်နေကြရပါတယ်။
လေးလေးကျော်ကတော့ ရောင်းရသမျှငွေအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းပေးယုံသာ၊ ဆွေမျိုးနီးစပ်ဆိုပေမယ့် အလှမ်းဝေးတဲ့ မိသားစုကနေရောက်လာရတဲ့ လေးလေးကျော်ကအနည်းငယ်နွမ်းပါးယုံရလွဲလို့ လူရိုးလူအေးတစ်ယောက်ပါ။ ကြီးကြီးကတော့ တစ်အိမ်လုံးရဲ့ အိမ်တာဝန်အတွက် မနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းလေးသာ တာဝန်ယူပေးရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ၃ ယောက်နဲ့အတူလေးကျော်ကဆိုင်ကိုကူဖွင့်ပေးပြီးမှ အိမ်ပြန်ရတာပါ။ လေးကျော်ပြန်ချိန်ဆိုရင် အိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ကြီးမေကလည်းသူ့အိမ်သူပြန်နေကျ။ ညနေပိုင်းမှ ကြီးမေကနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးညနေစာနဲ့တခြားအိမ်ကိစ္စလေးတွေကိုလုပ်ပေးရပါတယ်။ ကြီးမေရောက်လာတော့မှ လေးကျော်က ကျွန်မတို့ကိုဆိုင်လာသိမ်းပေးပြီး ၄ယောက်သား အတူတူပြန်လာရပါတယ်။ ခုတော့လည်းအားလုံးကနေသားကျနေတော့ ကိုယ့်မိသားစုလေးလို ဖြစ်နေပါပြီလေ။
“ငါ့အိမ်ငါလာတာဘယ်ချိန်လာလာပေါ့၊ နင်တို့ကို ကြိုပြောရဦးမှာလား”
ဆိုင်သိမ်းပြီးလို့ အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းဧည့်ခန်းထဲထိုင်နေတဲ့အကိုလေးကိုမြင်တော့ အေးရဲ့အာမေဋိတ်သံနဲ့အတူအကိုလေးရဲ့ပြန်ဖြေသံကို ကျွန်မ အိမ်ထဲမ၀င်ရေသေးဘဲနဲ့ အတိုင်းသားကြားလိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့တွေကတော့ ဘာရယ်မဟုတ် မေးလိုက်ပေမယ့် ပြန်ပြောလာတဲ့ အကိုလေးရဲ့စကားလုံးရွေးချယ်မှုတွေကိုတော့ ကျွန်မတို့ ခွင့်လွတ်ထားတာ ကြာခဲ့ပါပြီ။
ပြောစရာရှိတာပြောခဲ့ပြီးကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေလိုက်ပါတယ်။ ဧည့်ခန်းထဲငူငူကြီးကျန်ခဲ့တာကတော့ အကိုလေးတစ်ယောက်တည်း။
အိမ်နောက်ဘက်က ကြီးကြီးအသံတစ်အိမ်လုံးကြားရပါတယ်။ အကိုလေးပြန်ဖြေသံမကြားရပါ။ တစ်ခါတစ်လေလည်းအရမ်းကိုလက်ပေါက်ကပ်ပါတယ်။ နားလည်သိတတ်မှုတွေအကိုလေးမှာဘာမှကိုမရှိ။
“ဟော……..ငါ့တူဘယ်တုန်းကရောက်၊ ဒီမှာကွာ……. မနက်ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်ဖို့ ၀င်ဝယ်နေလို့”
“အဲ့လောက်အများကြီးတောင် ၀ယ်တယ်ဟုတ်လား ။
တော်ရုံတန်ရုံလုပ် လေးကျော် ပိုက်ဆံတွေအလားရနေတာမဟုတ်ဘူး ဖြုန်းမနေကြနဲ့။”
အပြန်အလှန်ပြောသံတွေကိုကြားနေရတဲ့ကျွန်မတို့တွေကတော့ ခပ်မဆိတ်သာနေလိုက်ပါတယ်။ကိုယ့်ဝမ်းကိုတောင် မသထာတဲ့အကိုလေးကတော့ သေရင်ကျွတ်မယ့်ပုံမမြင်။ ကျွန်မတို့ကနယ်ကလာပြီး 10တန်းမအောင် ဆိုပေမယ့် အကိုလေးထက်တော့ အသိပိုရှိတယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာပဲခံယူထားလိုက်ပါတယ်။
“ သူ့အိမ်ပဲဟယ်… သူနေချင်သလောက်နေပါစေပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား”
ညည်းတွားသံနဲ့အတူတခြားဘက်လှည့်သွားတဲ့ အေးကို ကျွန်မဘာမှပြန်မပြောလိုတော့ပါ။ ခုချိန်မှာတော့ ကျွန်မတို့ ၃ယောက်က တစ်ခန်းတည်းအိပ်ရချိန်ပါ။ စာရင်းတွေနဲ့ငွေတွေကိုစိစစ်နေတဲ့အကိုလေးကတော့ ကျွန်မကိုပေးထားတဲ့ အခန်းထဲမှာ။
လေးကျော်လည်းခုလောက်ဆိုအခန်းထဲဘာတွေလုပ်နေမသိ၊ အရင်ကတော့ဒီလိုအချိန်တွေ ကျွန်မတို့ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေကျ၊ စကားစမြည်ပြောနေကျ။ နေသားမကျတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ ကျွန်မတို့တွေ လကုန်ရက်ထိဘယ်လိုများကျော်ဖြတ်ကြရပါ့မလဲ။
အကိုလေးတို့နဲ့ စသိခဲ့ပုံတွေ မျက်လုံးထဲပြန်စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲအချိန်တွေကိုကုန်စေလိုက်ပါတော့တယ်။
----- ------- --------- ---------- -----
“အထည်ဆိုင်မှာလူလိုတယ် နင်လုပ်မလား၊ အလုပ်ရှင်တွေကအရမ်းသဘောကောင်းတယ်ဟ၊ ငါတို့ဆိုင်နဲ့ သိပ်မဝေးဘူးလေ”
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူမေးလာတဲ့စကားကို ကျွန်မသေချာစဉ်းစားနေမိပါတယ်။ နယ်ကနေလာရတဲ့ကျွန်မတွက်တော့ အလုပ်ကောင်းလေးတစ်ခုကိုလိုချင်နေတာအမှန်ပင်။ 10 တန်းဆက်မတက်ဖြစ်တော့မယ်အတူတူရန်ကုန်မှာအလုပ်ရှာမယ်စိတ်ကူးနဲ့ သူငယ်ချင်းရှိရာအဆောင်သို့ အရဲစွန့်ပြီးကျွန်မလာခဲ့မိတာပါ။
တစ်ခွန်းတည်းသာဆိုလိုက်ပေမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ ပြင်စရာမလိုတော့ပေ။
လက်လီလက်ကားဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ အထည်ဆိုင်ဆိုတော့ အလုပ်သမားတွေအများကြီးပါ။ သဘောမနောကောင်းတဲ့ ပိုင်ရှင်အန်တီကြီးကို ကျွန်မအလွန်ပဲချစ်ခင်မိပါတယ်။ ကျောသားရင်သားမခွဲခြားဘဲဆက်ဆံပေးတာမို့လည်းအလုပ်သမားအားလုံးကသစ္စာရှိကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နယ်ဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်ဖြစ်တော့ ကျွန်မဦးဆောင်ပြီးအေးတို့ညီမနှစ်ယောက်နဲ့အတူခုနေတဲ့နေရာကိုရောက်လာဖြစ်တာ။ ရန်ကုန်ဆိုင်ရောခုဆိုင်ရောပါဆို ကျွန်မလုပ်သက် ၅ နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။
ကိုယ့်စိတ်ကိုအိပ်ပျော်တဲ့ဘက်ဆွဲတင်လိုက်ရင်း……………မနက်ဖန်မနက်ဈေးကိုအကိုလေးလိုက်မှာပါလားလို့ မတွေးချင်တဲ့ အတွေးက ၀င်လာပြန်ပါရော………………..။
***---- ***---- ***--- ***---
ကြီးကြီးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ရင်းထမင်းချိုင့်ဆွဲထားတဲ့ကြားကလက်ကိုလှမ်းပြလိုက်ပါတယ်။ ကားနောက်ခန်းမှာ ၄ယောက်သား စကားတစ်ပြောပြောနဲ့လိုက်ကြပေမယ့် ရှေ့ခန်းမှာတော့ သူတစ်ယောက်တည်း။
ဆိုင်စဖွင့်ပြီဆိုကတည်းကရောင်းလိုက်ရတဲ့ဈေး၊ လက်ကိုမလည်ဘူး။ စကားစမြည်ပြောချိန်တောင် မရလိုက်ပါ။ အားလုံးကိုယ်စီအလုပ်နဲ့မို့ကိုယ့်တာဝန်ကို ကိုယ်ကျေရုံသာ။ နေ့လည်စားစားချိန်လောက်မှပဲလူကနဲနဲပါးသွားပါတော့တယ်။ သတိတရနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ အကိုလေးကထမင်းတောင်စားနေပီ။
“အေးတို့ ၂ ယောက်အရင်စားနှင့်နော်”
လုပ်လက်စကိုလက်စသတ်လိုက်ရင်းပစ္စည်းစာရင်းတွေကို ကျွန်မစစ်နေလိုက်ပါတယ်။ ထမင်းစားနေတဲ့ အေးတို့ ၂ယောက်ဆီမှ တစ်ခုခုကိုပြချင်ဟန်ကြောင့် ကျွန်မအသာလေး ထ ကြည့်မိတော့….
“ဟယ်…ကြည့်စမ်း။ ဒါအကိုလေးလက်ချက်ပဲ ဖြစ်ရမယ်”
တီးတိုးတီးတိုးသာပြောလိုက်ရပေမယ့် စိတ်ထဲတော့သိပ်မကျေနပ်ချင်။ အိမ်ရောက်ရင်တော့ ကြီးကြီးကိုမေးကြည့်ရမည်။
မနက် ၅ခွဲလောက်ကတည်းက လေးကျော် ဘုရားကိုဆွမ်းတော်ကပ်ထားတဲ့ ထမင်းတွေကအေးတို့စားနေတဲ့ ချိုင့်ထဲပါလာခြင်းပါ။ မာမာတောင့်တောင့် ထမင်းတွေကိုဘယ်သူမှမစားချင်။ ဘယ်သူ့ချိုင့်ထဲပါပါ စားရတော့မည်သာ။ ကြီးမေထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ငါးဆင့်ချိုင့်အံကအားလုံးတွက် တစ်ယောက်တစ်ချိုင့်။ဟင်းတွက်ကသက်သက်။
ထမင်းစားချိန်တစ်ချိန်လေးပဲခဏနားလိုက်ရတယ်။ ညနေထိလည်းရောင်းကောင်းလိုက်တာမကျေနပ်တဲ့စိတ်လေးတောင် ဘယ်ပျောက်သွားမှန်းကိုမသိ။ဒီလိုမျိုးမှ တစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးတာ။ အရင်ကတော့ ဘုရားဆွမ်းတော်တွေကလေးကျော်ပြန်မှ ကြက်လေး၊ ငှက်လေးတွေကိုကြွေးနေကျ။
“ နင်တို့အရင်ပြန်နှင့် ငါဝယ်စရာရှိလို့”
ညနေအိမ်ပြန်ချိန်ကားပေါ်မှာတော့ မနက်ကအကြောင်းမပြောကြလို့ တခြားဘာအကြောင်းများပြောဖြစ်ကြပါမလဲနော်။
“ အေးလေ..ဘယ်သူရှိမလဲနင်တို့အကိုလေးပေါ့။ အပိုကုန်တယ်တဲ့ ဆွမ်းတွေဒီလောက်အများကြီးကပ်စရာလားတဲ့။သောက်တော်ရေခွက်ကိုလည်း ကြီးတယ်တဲ့ ၃ ခွက်တောင်ဆိုတော့ ရေသန့်ဗူးဖိုးအပိုကုန်တယ်တဲ့။ မနက်ပိုင်းတိုင်းအဲဒိဆွမ်းတော်ကပ်ပြီးသားထမင်းတွေကိုချိုင့်ထဲထည့်သွားပြီးစားတဲ့တစ်ယောက်စာရလည်းမနည်းဘူးတဲ့”
တခြားဘာစကားမှ မဆိုဖြစ်တော့။ ဒီထက်ပိုပြီးဘာများပြောနိုင်မှာလဲနော်။
သိပ်မကြာခင် အကိုလေးအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်။ သူဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်း ဘာများဖြစ်မယ်ထင်ပါသလဲ။ ခက်ခက်ခဲခဲသိပ်မတွေးလိုက်ရပါဘူး။ ဘုရားသောက်တော်ရေခွက် အသေးလေး ၃ ခွက်။
ခေါင်းလေးတညိမ့်ညိမ့်နဲ့လေးကျော်ကတော့ ခွင့်လွတ်ထားပြီးဖြစ်မှာပါ။ မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ကျွန်မတို့တွေကတော့ လုပ်ပေးကြရုံပေါ့။ ဖြစ်စေချင်တာကို ဖြစ်အောင်နေပေးလိုက်တာပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။အကိုလေးစိတ်ချမ်းသာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်လေ။
အေးကိုသတိလှမ်းပေးလိုက်ရင်း ကျွန်မအာရုံတွေလည်းတခြားဘက်သို့ ရောက်သွားပါတော့တယ်။
လူပါးတုန်းလေးစားရတာဆိုတော့ ကျွန်မတို့လည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးစားရတယ်ကိုမရှိပေ။ သူဦးသူစားဘ၀နဲ့ပဲ နေရတာမလား။
တောက်ခေါက်သံခပ်ကျယ်ကျယ်ထွက်လာတာမို့ ကျွန်မမသိမသာအသာလေးငဲ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ဘာများအလိုမကျဖြစ်လဲပေါ့။တမနက်လုံးအားလုံးအကောင်းပါ။ ရောင်းတာဝယ်တာ စကားပြောတာကအစအားလုံးအဆင်ပြေသားပဲကို…..။အသာလေးခပ်မဆိတ်နေလိုက်ရင်း…………..။
ဟိုဘက်ဆိုင်ခန်းထဲကနေအမူအရာပေါင်းစုံနဲ့လုပ်ပြနေတဲ့အေးကို ကျွန်မနားမလည်ပါ။ဘာပြောမှန်းလည်းမသိတော့ အေးကိုအနားလာဖို့ပဲအချက်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်သားစိုးရိမ်ပူပန်မိတာထက် ရယ်စရာလားဟာသတစ်ခုလားမသိလိုက်ရအောင် ဖြစ်သွားပါတယ်။ အကိုလေးတို့ခံပေဦးတော့ပေါ့။မနက်ပိုင်းတိုင်းဆိုင်ထွက်ခါနီးမှ ဘုရားဆွမ်းတော်စွန့်ပြီးချိုင့်ထဲထည့်လာရတာခုဆိုအကျင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ အရင်နေ့တွေကတော့ အပေါ်ချိုင့်ကိုဖယ်ပြီးတခြားချိုင့်ဘယ်ချိုင့်မဆိုထည့်နေကျပါ။ ဒီနေ့ကျမှ မှားပြီးထည့်မိတဲ့အဖြစ်ကအကိုလေးကိုမခံနိုင်အောင်ဖြစ်စေခဲ့ပြီ။
ထမင်းချိုင့်ထဲ ကြီးကြီးထည့်ပေးသမျှတွေကို ကျွန်မတို့တွေ အကုန်စားရပါတယ်။ ထမင်းအကျန်တွေမထားရပါဘူး။ အဲဒါအကိုလေးစကားပါ။ ခုတော့သူ့စကားနဲ့သူထိပြီ၊ ချိုင့်ထဲပါသမျှကိုအကုန်စားရတော့မှာပါ။ ၃နာရီလောက် လေသလပ်သလိုဖြစ်ထားတဲ့ထမင်းမခြောက်တခြောက်လေးတွေကိုသူစားရတော့မှာပါ။
ကျွန်မတို့လည်းအသာလေးကြည့်လိုက်၊ ပြုံးစိစိလုပ်လိုက်နဲ့ပဲကဲ..မှတ်ပီလား. သူများတွေကိုစားခိုင်းချင်ဦးဟုစိတ်ထဲကပဲ ပြိုင်တူပြောနေမိပါတော့တယ်။ မစားချင်ပဲစားနေရတဲ့ အကိုလေးအဖြစ်ကိုတော့ ကျွန်မတို့ မှတ်တမ်းတင်ထားဦးမှာပါ။
ကပ်စေးနဲတာနဲ့စိစစ်တာကွာခြားလွန်းပါတယ်။ တခြားသောအရာတွေလည်းကပ်စေးနဲတတ်ပေမယ့် သဒ္ဒါတရားကိုအခြေခံတဲ့လုပ်ရပ်တိုင်းကိုအကိုလေးကအပြစ်မြင်တတ်ပါတယ်။ အပြစ်မြင်တတ်တဲ့အကိုလေးတစ်ယောက် အပြစ်မှလွတ်ကင်းပါစေဟုသာတိုးတိုးလေးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။